Ganacsato ku eedeysan iney dalka soo geliyeen waxyaabo qarxa oo Maxkamad la soo taagay | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO Ganacsato ku eedeysan iney dalka soo geliyeen waxyaabo qarxa oo Maxkamad la...
Ganacsato ku eedeysan iney dalka soo geliyeen waxyaabo qarxa oo Maxkamad la soo taagay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Somalia ayaa maanta dhegeysatay Ganacsato ku eedeysan inay dalka soo gelin jireen Kiimikada iyo Agabyada loo adeegsado waxyaabaha qarxa, ayna u gudbin jireen Alshabaab.
Ganacsatadan ayaa gaaraya todoba xubnood ayaa waxaa maxkamadda ka maqnaa laba ka mida, iyadoo magacyadooda kala yihiin:
Cabdisalaan Cali Faarax, Khadar Cabdisalaan Maxamed, Maxamed Cabdi Sheekh Cumar, Daahir Cusmaan Maxamed, Cabdisalaan Cusmaan Maxamed, iyo laba eedeysane oo maqane baxsad ahaa.
Xeer ilaalinta ku soo eedeeysay inay dekadda Muqdisho kasoo dejin jireen, maadooyin kala duwan oo laga sameeyo qaraxyada, Jaakada Qaraxyada, Computero iyo Agab Ciidan.
Maxkamadda ayaa la hor keenay caddeymo, muuqaallo iyo tijaabooyin lagu sameynayo maadooyinka Kiimikada ah ee holaca sameeya, wadahadal dhexmaraya raggan iyo Al-shabaab.
Xeer ilaaliye ku-xigeenka Maxkamada Ciidamada qalabka sida Dhamme Muumin Xuseen C/llaahi ayaa sheegay in Agabyo fara badan oo ay dalka ay keeneen Raggan loo adeegsaday qaraxyo lagu fuliyay Muqdisho oo lagu dilay dad badan oo ay ku jiraan mas’uuliyiin.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo fadhiga Maxkamadda soo xiray ayaa shaaciyey in dhageysiga kiiskan la soo gabagabeeyay, ayna go’aan kasoo saari doonto Maxkamadda.
Previous articleDowlada Somalia oo baadi goobeysa Dhalinyaro ay ka dhigto Ciidamada Haramcad
Next articleSomaliland opposition win majority in first parliamentary vote since 2005